နိုင်ငံပေါင်း ဆယ်နိုင်ငံက စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး ဆယ်ယောက် – XB Media Myanmar
နိုင်ငံပေါင်း ဆယ်နိုင်ငံက စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး ဆယ်ယောက်
လူသားတွေရဲ့ မျက်ဝန်းက လိမ်ညာတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေသာ ချောတတ်ပြီး ကိုယ်မနှစ်သက်သူတွေ ရုပ်ဆိုးတတ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ…ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ချောတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ ဘယ်လောက်ချောလဲ အတူတူလေ့လာကြပါစို့…။ပြီးရင် နံပါတ် ဘယ်လောက်က အချောဆုံးလဲဆိုတာ မန့်ပေးခဲ့ပါ။
10. ဖိလစ်ပိုင် (Philippines)
Liza Soberano ဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးမော်ဒယ်အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အပြုံးကြောင့် သူမရဲ့ အလှဟာ ပေါ်လွင်တာလို့ ပရိသတ်က အသိအမှတ်ပြုထားဖြစ်ပါတယ်။
9. ဗြိတိန် (Britain)
Helen Flanagan ဟာ ဗြိတိန်သူဖြစ်ပေမယ့် မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပုံစံနဲ့ ငယ်စဉ်ထဲက နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ အင်္ဂလိပ်အသံအစစ်မဟတ်ပဲ အိုင်းရစ်သံဝဲပြီး ချစ်စရာကောင်းသူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
Helen Flanagan ဟာ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါသွေးရောသူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ငယ်စဉ်ထဲက လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးပြီး သူမအင်အားနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ပင်ကိုယ် လွတ်လပ်တဲ့ စတိုင်နဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ အပြုံးတွေကြောင့် Fun များလာတာဖြစ်ပါတယ်။
Doutzen Kroes ဟာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အရပ်က5ပေ7လက်မ ရှိပြီး အညိုဘက်သမ်းတဲ့ ရွှေရောင်ဆံပင်တွေ ရှိပါတယ်။သူမရဲ့ အလှတရားကြောင့် ဒီ 10 ယောက် မှတ်တမ်းဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
Cristina Chiabotto ဟာ အီတလီသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အညိုရောင်မျက်ဝန်းတွေက တိမ်းညွှတ်ရီဝေစေတာဖြစ်ပါတယ်။
Norelys Rodriguez ဟာ ဗင်နီဇွဲလားသူဖြစ်ပြီး သရဖူအများဆုံးရထားတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အရပ်နဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ဆုကို ရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။
Meryem Uzerli ဟာ တူရကီနိုင်ငံသူဖြစ်ပြီး သူမကို တူရကီအစိုးရက အလှဆုံးမိန်းမချောအဖြစ် တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကို ဥရောပဘက်က သူဌေးတွေက လပ်ထက်ခွင့်တောင်းခံမှုတွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။
Irina Shayk ဟာ ရုရှားနိုင်ငံသူဖြစ်ပြီး ရုရှားဆန်တဲ့ စွဲဆောင်မှုနဲ့ ကမ္ဘာကို သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အချိုးအစားနဲ့ သူမရဲ့ ရီဝေဝေမျက်ဝန်းတွေဟာ သူမကို ချစ်စဖွယ်ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
Ani Lorak ဟာ ယူကရိန်း နိုင်ငံသူဖြစ်ပေမယ့် သူမဟာ ရုရှားသွေးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ရုရှားရဲ့ မျက်လုံးမျက်ခုံးနဲ့ ယူကရိန်းရဲ့ ဆံပင် နှုတ်ခမ်းတွေရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Adriana Lima ဟာ ဘရာဇီးနိုင်ငံသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ မျက်ဝန်းရွဲကြီးတွေဟာ ဘရာဇီးသူတစ်ဦးရဲ့ အလှစစ်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ အလှပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာခွဲစိတ်ပြီး မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ရုပ်ပြောင်းသွားတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
လရဲ့ အောက်ဘက် မိုင်အဝေးမှာ ” ဒီပါ အဖြစ် ပါဝသရုပ်ဆောင်မယ့် ဝင်းခန့်မိုး ရဲ့အကြောင်း